खैरेनीमा जारी भलिबल प्रतियोगितामा आज उपाधी भिडन्त हुँदै – Himalitimes
खैरेनीमा जारी भलिबल प्रतियोगितामा आज उपाधी भिडन्त हुँदै
२०७७ चैत्र १८ ०७:०२ मा प्रकाशित
बौनिया, कैलाली । कैलालीको बर्दगोरिया ३ खैरेनीमा जारी चौथो खुल्ला राष्ट्रब्यापी भलिबल प्रतियोगितामा आज (बुधबार ) उपाधी भिडन्त हुदैछ । उपाधिका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी र डल्फीन फिड लम्कीबीच प्रतिस्पर्धा हुने हुद छ ।
मंगलबार भएको सेमिफाईनलमा डल्फीन फिड लम्कीले चिसापनि एडभेन्चर एण्ड रिसोर्टलाई पराजित गर्दै फाईनल प्रवेश गरेको हो भने दोस्रो खेलमा राष्ट्रिय मा. वि. तारानगरलाई पराजित गर्दै प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले पनि फाईनलको यात्रा पूरा गर्यो ।
प्रतियोगितामा तेस्रो स्थानका लागि चिसापानी एडभेन्चर एण्ड रिसोर्टसंग राष्ट्रिय मा.वि. तारानगर प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । स्थानीय साइनिङ स्टार युवा क्ल्वको आयोजनामा फागु पुर्णिमा होलीको अवसरमा गत शनिवार देखि सुरु प्रतियोगिता भएको थियो । “राष्ट्रको शान खेलकुद बिकासको अभियान” “भन्ने मुल नाराका साथ सुरु भएको प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रम बुधबार (आज) १० बजे देखि हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले नगद रु. ८१ हजार पाउने छ भने द्धितिय हुनेले रु. ४५ हजार र तृतीयले रु. २१ हजार ट्रफि मेडल प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने छन । यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट बिधा तर्फ वेस्टस्पाईकर, वेस्ट सर्भर, वेस्ट ब्लकर, बेस्ट सटर, बेस्ट लिव्रो लाई नगद रु. २ हजार, बेस्ट प्लेयरलाई ३ हजार नगद, १ थान टि–सर्ट र अनुशासित टिमलाइ मायाको चिनो प्रदान गर्ने छन ।
होलीमा ग्याङ फाइटमा मृत्यु प्रकरण : प्रहरीद्वारा ७ अभियुक्त पक्राउ